Kospet Optimus 2: Mwepụta, atụmatụ na nnweta | Gam akporosis
Smartwatches ewerewo nnukwu itu ukwu n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi ọganihu na teknụzụ. Ọtụtụ n'ime ha gụnyere akwụkwọ akụkọ banyere oke osimiri nke ihe na-atọ ụtọ, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha na-enweghị usoro ngụta, mmetụ oxygen, na-echefughị ​​ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Otu n'ime elekere amamịghe ọhụụ nke na-aga n’ihu bụ Kospet Optimus 2, emepụtara iji nweta ihe kachasị mma site na iyi ya na nkwojiaka. Otu n'ime ọrụ dị egwu nke elekere a bụ na ọ na-agbakwunye ọrụ igwefoto na tọọchị, otu n'ime ọtụtụ ike ọ na-agbakwunye.
Nweta na ịpị ebe a Kospet Optimus 2 ọhụrụ na ọnụahịa kachasị mma, na-eji dere 333 OPTIMUS2.
1 Nnweta na ọnụahịa
3 Akụrụngwa iji tụnyere
4 Autonomy, ihe dị mkpa
5 Ntụle igwefoto
6 Sọftụwia na nlekota
7 Usoro njikwa
8 Ikuku na-akwụ ụgwọ
9 Optimus 2 vs. Isi 2
9.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Ndị ahịa 50 mbu ga - enweta eriri efu (ojii ma ọ bụ aja aja) bido na June 28, ụbọchị ntọhapụ nke ọhụrụ swartwatch a. Ndị ọrụ na-enye Kospet Optimus 2 n'etiti June 28 na July 28 ga-enwe ike ịzụta eriri akwụ ụgwọ ma ọ bụ ọnụ ahịa na ọkara ọnụahịa, ọnụahịa mbụ bụ $ 9,99.
Ọnụ Kospet Optimus 2 bụ euro 167,64, ma ị nwere ike ịzụta igwe elekere site ebe a. Ọ na-belatara site 21%, ebe ọ bụ na mbụ na-eri bụ 209,26 euro si June 28 na July 28 iji na cupón 333 OPTIMUS2.
Ọzọkwa, site were ya na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ị nwere uru ndị a:
Na-ahụ na ị na-enweta a mbụ na ngwaahịa a na-emegheghị.
7 ụbọchị akwụkwọ ikike, iji weghachite ngwaahịa maka ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, ịnwere ike dochie ya na nke ọzọ n'ime ụbọchị iri na ise.
Akwụkwọ ikike 1 afọ maka akụkụ ma ọ bụ nrụzi, gụnyere ndị ọzọ.
Modeldị Optimus 2 na-akụ nzọ na panel IPS nke anụ ọhịa 1,6 Site na mkpebi nke 400 x 400 pikselụ, ọ dị oke mma ma gosipụta ihe niile n'ụzọ doro anya. Kospet Prime 2 n'aka nke ọzọ na-akwado ihuenyo 2,1-inch na mkpebi nke pikselụ 480 x 480 nke ụdị IPS na 323 PPI.
Ọ bụ otu n'ime isi ihe maka Kospet Optimus 2, ebe ọ bụ ihe onye ọrụ ga-ahụ ozugbo ha yikwasị ya na nkwojiaka ụbọchị niile. Na ncha nakwa dị ka nkọwa na-ọma etinyere maka ahụmịhe kachasị mma, na-akwado ya n'ụzọ dị ebube na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Akụrụngwa iji tụnyere
Optimus 2 dị ka ọkọlọtọ gụnyere nhazi abụọ, Helio P22 na 1,5 GHz n'ihi na a ọsọ ọsọ nke arụmọrụ a ga-eji dị ka ọ bụ a ama, mgbe PixArt PAR2822 ga-eji ya dị ka a smart nche. Ejiri Prime 2 mbipute iji buru otu CPU, kpọmkwem Helio P22 mgbawa site na MediaTek na 1,5 GHz.
Banyere ebe nchekwa na ebe nchekwa, ma kwadebe 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa, ha zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ngwa, chekwaa onyonyo, vidiyo na dọkụmentị. Ha weputara foto di elu na obere vidiyo n'enweghi nsogbu, na mgbakwunye na edekọ ekele maka igwefoto ha jikọtara.
Autonomy, ihe dị mkpa
Ha abụọ nwere nnwere onwe yiri nke a, ụdị Kospet Optimus 2 biara na batrị 1.260 mAh ruo ụbọchị ole na ole iji rụọ ọrụ na ọnọdụ 4G, ebe ọ ruru ụbọchị ise na ụdị 5G Lite. Ọ na-abịa na 4 mAh ikuku na-akwụ ụgwọ ikuku na-enweghị ike ịkwụsị batrị.
Anya abụọ ahụ buliri ihe mmetụta 13 megapixel, ihe Kospet Optimus 2 na - ejikọ ihe mmetụta sensọ 214 megapixel Sony IMX13 Site na ọkụ ọkụ na-enwu gbaa, dị mma maka iji onwe gị na vidiyo.
Igwe elele bụ ogo 90 maka Optimus 2 ọhụrụ, gbakwunye ndekọ bụ Full HD (1080p) n'ihe dị ka 30 Fps, ebe foto ndị ahụ dị oke mma.
Sọftụwia na nlekota
Otu n’ime ihe ndị bụ isi nke Kospet Optimus 2 bụ sọftụwia agbakwunyere, ruo 31 ụdị egwuregwu dị iche iche, na-emelite usoro 9 gara aga. Nke a na - eme ya otu ụzọ tupu elele egwuregwu ndị ọzọ n'ahịa, ebe Prime 2 nwere 9 dị ka ọkọlọtọ.
Kospet Optimus 2 na - agbakwunye ọrụ nlekota ahụike ka mma: Optimus (Kospet Optimus mbipute 1) na - akwado nnwale obi, na Optimus 2 na - akwado ogo obi, ikuku oxygen na nyocha ụra.
Mmelite sistemụ dị mkpa, ya mere Optimus 2 melite gam akporo 10.7, na ọnọdụ abụọ dị mkpa, ọnọdụ bụ isi na ọnọdụ ọkụ.
El Kospet Optimus 2 na ọnọdụ ọkụ nwere ụdị arụmọrụ dị elu nke elekere gam akporo (iji ọrụ arụ ọrụ yiri nke a standalone smartphone) nke nwere ike ime ka ọrụ niile rụọ ọrụ, dị ka nkata vidiyo, egwuregwu, igwefoto, egwu, netwọkụ mmekọrịta yana oku.
Imkpụrụ kachasị mma nke Optimus 2 nwere ike iji ngwa niile dị na ọnọdụ dị mkpa, dịka oku, SMS na ahụike; N'iji usoro egwuregwu 31 wuru, usoro bụ isi nwere ọtụtụ atụmatụ. O siri ike erepịa, na mgbakwunye na ịhapụ 4 GB nke Ram.
Kospet na-akwụ ụgwọ na ikuku na-akwụ ụgwọ maka ụdị Optimus 2Thezụta igwe elekere smart igwe na-abịa ụlọ akụ ike 1.000 mAh ịkwụ ụgwọ mgbe ịchọrọ ya. Ihe kachasị mma bụ ịnwe ọdụ a mgbe niile 100% iji nye smartwatch ndụ bara uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ ọtụtụ oge.
Ọ bụ otu n'ime nnukwu uru nke ụdị a, ebe ọ na-agbakwunye batrị 1.250 mAh, ebe Kospet's Prime 2 na-eme ya na batrị 1.600 mAh a kpọtụrụ aha na mbụ. Ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ bụ isi ihe ị ga-atụle, ịbụ ihe dị mkpa ka ọchịchị obodo ghara ịta ahụhụ n'oge ọ bụla.
Optimus 2 vs. Isi 2
A tọhapụrụ Kospet Optimus 2 mgbe nnukwu ihe ịga nke ọma nke Kospet Prime 2 gachara, elekere abụọ na-ekerịta ụfọdụ njirimara, ma nwee ọtụtụ ọdịiche. Dịka ọmụmaatụ, imewe ahụ, Optimus 2 na-ahọrọ okirikiri okirikiri, yana ọtụtụ mgbakwunye na obere obere bọtịnụ na nkuku, ebe Prime 2 na-egosi bọtịnụ abụọ akọwapụtara n'akụkụ aka nri.
N'ịga n'ihu na akụkụ a haziri, Kospet Optimus 2 na-egosi ọkpụkpọ nke agbadoro ndị na-eme egwuregwu, ọ bụ ezie na ọ na-adabara onye ọ bụla na ụdị site na ịnweta ọmarịcha egwuregwu. Prime 2 nwere akụkụ dị iche, nke e mekwara maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-amalite egwuregwu.
Prime 2 ndekọ yiri nke Optimus 2, 1080p na-edekọ na 30 FPS, na-ejide ihe oyiyi dị nkọ. Anya nke Kospet Prime 2 bụ otu ihe mmetụta ahụ, ịbụ igwefoto na-agbagharị na ụdị abụọ ahụ, ọ bụ ezie na nke Prime na-abịa na akụkụ nke elu nke okirikiri.
N'aka nke ya, Prime 2 na-abịa site na nyocha nke obi, pedometer na ụra ụra.
Banyere batrị, Kospet Prime 2 na-aga 1.600 mAh, batrị nke kwere nkwa kwa ụbọchị banyere ụbọchị abụọ na ọnọdụ 4G, bụ otu n'ime batrị kachasị na elekere elekere. Echiche dị n'etiti abụọ ahụ yiri nke a, na-ekewa naanị 240 mAh n'etiti otu na nke ọzọ, yabụ anyị nwere ike ihu agbụ.
Kospet Prime 2 nwere gam akporo 10, megharịrị mmekọrịta niile na sistemụ na akara ngosi UL, na-agbakwunye mmekọrịta mmekọrịta dị iche iche dị iche iche na interface menu yiri nke gam akporo Wear. Ma Optimus 2 na-aga n'ihu, na-eru gam akporo 10.7, si otú na-akwado a elu version.
AKW OKWỌ AKWPTKWỌ 2
IKIRU 1.6 "IPS nwere mkpebi x pixel 400 x 400
Nhazi Helium P22 / PixArt PAR2822
N'ihu CAMERA 214MP Sony IMX13 ihe mmetụta
OS gam akporo 10.7
UMUAKA 1.260 mAh
Njikọ 4G / 5.0 + 5.0 Uhie / Wi-Fi / GPS
NDỊ ọzọ 31 egwuregwu ụdịdị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Kospet Optimus 2: mmalite, atụmatụ na nnweta